विराटनगर ४ माघ । विराटनगरका चर्चित उद्योगी मोतीलाल दुगड प्रधानमन्त्री केपीकर्मा ओलीको विषेश आर्थिक सल्लाहकार बन्ने भएका छन् । संसद विघटनपछि भएको सरकार पुनर्गठनका क्रममा उद्योग राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका विराटनगरका चर्चित उद्योगी दुगडले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । राज्यमन्त्री भए पनि फूल मन्त्री सोसरह सक्रिय भई काम गरेका उद्योगी दुगडलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा लैजान लागेका हुन् ।
बालुवाटारस्थितस्रोतका अनुसार उद्योगी दुगडलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन लागेका छन् । अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि डा. युवराज खतिवडाको व्यवस्थापनका लागि ओलीले यो पद सिर्जना गरेका थिए । डा. खतिवडा केही दिन मात्र यो पदमा रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा डा. खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनाएर पठाइएपछि विशेष आर्थिक सल्लाहकारको पद रिक्त छ । मन्त्री सोसरहको हैसियत कायम हुने र सुविधा पाउने गरी सिर्जना गरिएको यो पदमा उद्योगी दुगड जान लागेका हुन् ।
दुगडलाई यो विषयमा बालुवाटारबाट खबर भइसकेको छ र उनलाई आइतबार साँझसम्म विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको पत्र दिइने तयारी भइरहेको स्रोतले जानाएको छ । सो विषयमा दुगडसँग बुझ्दा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘अहिले म विराटनगरमा छु, त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन ।’ उनले भने ।